Cajaladda: Muhiimadda Ka-reebistaada Calaamadaha IP-ka Google Analytics
Ganacsiyada yaryar iyo shirkadaha yaryar oo wax ka beddelaya boggooda internetka ee SEO ayaa la tacaalayay caqabado badan, gaadiidka gudaha waa mid ka mid ah. Waxay noqon kartaa mid aad u xanuun badan si aad u daawato ganacsigaaga oo hoos loo dhigo spam u gudbinta iyo gaadiidka laga helo deegaanka gudaha.
Muhiimada ay tahay in la kala saaro taraafikada gudaha ee ka baxsan taraafikada dibadda si fiican looma arko. Max Bell, Maareeyaha Guusha Macaamiilka Semt , ayaa sheegay in Google Analytics uu kaftamayo taraafigga gudaha, xogta aan loo baahneyn, spam gudbinta, iyo khatarta bini-aadamka ah ee gacan ka geysanaya macaamiisha bogga. Isku day in la raadiyo saameynta gaadiidka ee ay sameeyeen shaqaalihiina iyo suuqyadeyaal gashan boggaaga internetka waxay si aad ah u hanan karaan xogtaada.
Maxaad u falanqeyneysaa dhowr nooc oo cinwaanada IP ah oo asal ahaan ka soo jeeda xafiiskaaga?
Shaqaalahaaga, wada-shaqeeyayaasha, iyo la-taliyayaasha suuq-geynta waxay u horseedi karaan dhacdooyinka ganacsigaaga internetka adiga oo aan aqoonin - vape e cig parts. Hagaajinta aragtidaada ganacsiga waa arrin guud ahaan ku xiran tahay ballanqaadyadaada waxayna ku dhufan doontaa suuqa bartilmaameedkaaga..Shakhsiyaadka kuqoran website-kaaga ayaa raba inay dib u riixaan kaddib markay dhamaystiraan shaqadooda maalinlaha ah. Waqtiga dheer, waxay ku dhamaanayaan hoos u dhigista qiimaha boogahaaga, dhacdo muujinaysa algorithms si aad ugu qadariso ereyadaada muhiimka ah sida aan ku habboonayn
Ka reebista cinwaanada IP-ga Google Algorithms waxay ku xiran tahay tirada shaqaalaha iyo tirada dadka galaya boggaaga. Miyaad tahay macaamiil ama mulkiilaha bogga oo ka shaqeynaya ka reebista cinwaano gaar ah oo ku qoran warbixinta Google Analytics? Waa kuwan tallaabooyin yar oo fudud oo kaa caawin doona inaad joojiso cinwaanka IP-ga guud ahaan
Ku soo gali Google Analytics oo dooro qaybta maamulka
Hagaajinta xisaabaadka 'Hantida' iyo hubi guryaha ku habboon kuwa ku jira boggaaga
Riix batoonka 'View' ka dibna riix 'Filters' icon
Taabo badhanka 'Add Filter' si aad u abuurto filter cusub
Abuur 'magac magac' oo aad si fudud u xasuusan kartid
Xaaladdan, tixgeli inaad isticmaasho 'Predefined' oo ah 'Foomka Nooca' intii aad 'nooca filter' ah
Dooro nooca fiilada oo riix badhanka 'Ka saar'
Ku qor cinwaanka IP-ga in laga reebo. Taasi waxaad ka shaqaynaysaa marka laga reebo cinwaan IP ah oo gaar ah
Riix badhanka 'Key' si aad u badbaadiso isbeddelladaada
Marka loo eego la-taliyayaasha suuq-geynta, la shaqeynta shaandhada tijaabada ah waxaa lagula talinayaa inay iska ilaaliyaan sheyda xogta qiimaha leh. Tixgeli inaad xogtaada u rogto aragti faleedka ah ka hor inta aanad xogtaada ku xalin. Soo rog shaandhadaaga oo iska hubi isbeddelka tirada ee soo booqda boggaaga. Tirada dadka soo booqanaya waa inay hoos u dhigaan lambar dhab ah kadib markii ay soo saaraan cinwaano IP ah oo ku yaal goobtaada. Ku soo dhejinta suuqa bartilmaameedka dhammaadka ololehaaga Search Engine Optimization waa mid aad muhiim u ah. Diiwaanadaadu waxay muujinayaan waxyaabo badan oo ku saabsan qaadashada taraafigga gudaha iyo xawaaraha gudbinta. Ka reebo cinwaanada IP-yada ee shabakadaada ganacsiga adigoo ku xareeya iyaga oo isticmaalaya raadinta Google Analytics.